‘रिभेन्स’ हेरेपछि दर्शकका आँखा रसाए ! « Sajilokhabar
सुनसरी, ५ मंसिर । शनिबार इटहरीको इलाइट सिनेमा हलमा ७० बर्षिय शान्ता पाठकको आँखामा आँसु थियो । चलचित्र रिभेन्स हेरेपछि उनको आँखा भरी आँसु देखेपछि हामीले सोध्यौ आमा किन आँखामा आँसु? उनको जवाफ थियो नेपाली छोरी चेलि यसरी नै बिदेशमा बिचिदै छन । साच्चै सत्य घटनाको फिल्म आज हेर्न पाए । अब चाहिँ सचेत हुन्छन कि उनको जवाफ थियोे । चलचित्र रिभेन्सको विशेष सो पुर्वको इटहरीमा भएको छ । पुर्वको विभिन्न क्षेत्रमा छायांकन भइरहेको फिल्म शनिबार हलमा प्रदर्शन भएको होे ।
डिएस डिजिटल सिनेमाको प्रस्तुतिमा बनेको चलचित्र मोरङको तरहराका विभिन्न क्षेत्रमा छायांकन भएको थियो । शंकर अधिकारी घायलको लेखन तथा निर्देशन रहेको फिल्ममा नेपालबाट बिदेशमा बेचिएका चेलिबेटीहरुको कथालाई समेटिएको छ ।
नेपालमै पहिलो पटक साउथ मुभिको झल्को दिने गरि चलचित्र पर्दामा ल्याईएको हो । चलचित्रमा कलाकार रविन श्री, गंगा कुवर, रोशन बिसी पुष्पराज नेपाल, संचारकर्मी खगेन्द्र घिमिरे खरो, अमन देव, पदम सुनार, प्रतिका शर्मा, आर भिलेन, सरु बराल, रेनु थापा, विशाल अग्रवाल, दिव्य बिटि सुस्मिता पाण्डे, अम्विका खड्का रहेका छन् ।
कृष्ण पाण्डेकाे छायांकन, देव महर्जनकाे द्वन्द्व, राम महर्जनको नृत्य रहेको चलचित्र जेष्ठको दोस्रो साता दर्शक माझ हलमा प्रस्तुत गरिने बताएको छ । यस चलचित्रले दर्शकको मन जित्न सफल हुने निर्माण टिमले विश्वास लिएको छ ।